Kukhethwa Intshantshu Zomdlalo weNguqu Zalonyaka ezePSL ngoMgqibelo
BULAWAYO — Umkhosi wokukhetha abadlali bomdlalo wenguqu abadlale kuhle okwedlula abanye esigabeni se Castle Premier Soccer League lonyaka ulakho ukuba lengxabangxoza ngenxa yendlela ekhethwe ngayo intatheli ezizaphatheka kuloluhlelo.
Intathelizindaba zemidlalo eziphuma edolobheni lako Bulawayo zikhonona kakhulu ngokungakhutshwa kwamagama alabo abazaphatheka kuhlelo lokukhetha abadlali abadlale kuhle lonyaka lona olukhangelelwe ukuqhutshwa ngomgqibelo ozayo.
Okusolisa intatheli zemidlalo zako Bulawayo yikuba kulabanye babo ababhala ngomdlalo kanobhutshuzwayo njalo abangaswelakaliyo enkundleni okudlalelwa umdlalo wenguqu abangazange bamenywe ukuba yingxenye yequla lentatheli ezizaphatheka kulumsebenzi wangempelaviki.
Lokhu kudale ukuba zicele ukuba ziphiwe uluhlu lwalabo abamenyiweyo ukuze zizibonele ukuba inani lalabo abasebenza besesigodlweni lihlukene kangakanani lenani lentatheli ezisebenza zikoNtuthu ziyathunqa.
Limizamo ayisaphumelelanga ngoba isiphathamandla se Multimedia, okuyiyo inhlanganiso eyaphiwa ilungelo lokuqoqa loluhlelo, uMajor Tikiwa edlala umacatshelana engasadobhi locingo lwakhe.
Intatheli zizame ukudinga usizo kusiphathamandla senhlanganiso yePremier Soccer League uKennedy Ndebele yena ogeze izandla zakhe wathi udaba lokuba yiziphi intatheli ezizakhetha abadlali lungumlandu kaTikiwa.
Eyinye yentatheli ezibhala ngomdlalo wenguqu ziko Bulawayo uDanisa Nyathi uthi kumele intatheli zemidlalo zako Bulawayo zinxwanele ukusetshenziswa ukupha isisindo uhlelo olungaqondanga.
Abanye okumele bakhethe abadlali kanye lomqeqetshi abaqhube kuhle lonyaka ngabagoqela bona abaqeqetshi abasebenza esigabeni saphezulu kanye labadlali asebathatha umhlalaphansi.
Ukuba khona kwabaqeqetshi lakho kungahlupha njengoba kulimpelaviki kuyilapho okuzadlalwa khona imidlalo eyokucina yesigaba se Castle Premier Soccer League.
Amaqembu amathathu athi i Harare City, iDynamos kanye le Highlanders agijimisa ukuphakamisa inkezo yeligi kuthi ngaphansi kwengalane kulamaqembu ayisithupha alwisa ukungagunyulwa esigabeni saphezulu okutsho ukuba kuzakuba nzima ukuba abaqeqetshi bawo batshiye amaqembu abo besiya kuhlelo lokukhetha ama Soocer Stars.
Abadlali abakhengelelwe ukungena ekhalendeni yalonyaka ngabagoqela onozinti abathi uGeorge Chigova we Dynamos, uMunyaradzi Diya we Highlanders kanye lo Tafadzwa Dube weqembu le Caps United.
Abadlali baphakathi abalakho ukukhethwa ngabathi uEric Chipeta we Hwange, uOcean Mushure we Dynamos, uCrispen Dickson we Harare City, uKuda Mahachi weqembu leChicken Inn, uMernard Mupera we How Mine, uTafadzwa Mombeshora we Shabanie Mine, uSilas Songani weHarare City, uCharles Sibanda kanye lo Thabani Kamusoko abeqembu le FC Platinum kanye lo Dumisani Ndlovu owe Highlanders.